အို မိခင် ဧရာ၊သမိုင်းမှာ ကျန်ရစ်၊ ရာဇ၀င်မြစ် တစ်စင်း၊ဖြစ်တည်ခြင်းအစဉ်၊ရှင် သန်စေချင်သည်။ အရိုင်း ဆန်ဆန်၊သမိုင်းကို အထီးကျန်၊မိုက်ရို င်းသောအ ကြံကြောင့် မကွယ်ပျောက်စေလိုပါ။ မိခင်တစ်ဦး၏ချစ်ခြင်း၊ပြည်သူတို.၏မြတ် နိုးခြင်း၊နိုင်ငံတစ်ခု၏ရှင်သန်ခြင်း ၊ရင်နင့်အောင်ပေးဆပ်၊ အမိ ဧရာ အတွက်--ဒို. အားလုံး - မားမား မတ်မတ် ရပ်ကြဘို့အချိန်တန်၊မနက်ဖန် ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်၊ ဘယ်အာဏာစက်ကြောင့်မှ အဖျက်မခံ၊အားမာန်တွေစု စည်းကြ ၊ညီညွတ်ကြ၊နိုးထကြ၊ ထာဝရရှင်သန်၊အမိအတွက်အားမာန်တင်း ၊ချစ်ခြ င်းဖြင့်စီး ဆင်းပါလေ-အို - အမေ။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 1:49 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook